Dr. Taleb Rifai Kushevedzera Nechimbichimbi kuUNWTO Nhengo dzeNyika Dzichipindura kuDare Repamusoro Mutsamba Itsva Yakavhurika.
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Wtn » Dr. Taleb Rifai Kushevedzera Nechimbichimbi kuUNWTO Nhengo dzeNyika Dzichipindura kuDare Repamusoro Mutsamba Itsva Yakavhurika.
African Tourism Bhodhi • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • Dhinda Zviziviso • Spain Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Wtn
Aimbova Secretary-General weUNWTO Dr. Taleb Rifai
Dr. Taleb Rifai, aimbova Munyori Mukuru weWorld Tourism Organisation (UNWTO), anopindura nhasi kuMutungamiriri weUNWTO Executive Council maererano nevhoti iri kuuya yakavanzika yekusimbisa kana kusasimbisa iye zvino Munyori Mukuru weUNWTO.
The World Tourism Network Advocacy Committee ichangobva kubudisa tsamba itsva yakazaruka naDr. Taleb Rifai, aimbova Munyori Mukuru weUNWTO.
Tsamba iyi imhinduro kuna tsamba yakavhurwa nezuro kunyika dziri nhengo neMutungamiriri weUNWTO Executive Council kubva kuChile.
Tsamba iyi inokurudzira nhengo dzeUNWTO kuti dzione kupokana kwese munyaya iyi yakatsanangurwa mutsamba yake.
Verenga tsamba yaDr.Rifai
Vanodiwa Vadikani uye Shamwari,
Ndiri kufara kuti pakupedzisira ndagamuchira mhinduro kune tsamba yakabatana yandakasaina naFrancesco Frangialli, achiri muna Zvita 2020, panguva yesarudzo dzeUNWTO kuMunyori Mukuru, uye ndinotenda Mutungamiriri Anoremekedzwa weKanzuru nazvo. Unogona kuyeuka kuti mutsamba yedu, takakurudzira Secretariat kuti iongororezve nguva yaNdira 2021 ye113 Executive Council zvichitevera shanduko yemazuva eFITUR kubva muna Ndira kusvika Chivabvu 2021.
Handisi kugashira nekutenda mashoko akataurwa na Hon. Mutungamiri weKanzuru kuti zviri pamutemo zvakacherechedzwa zvakasimba muzvisarudzo zve112 ne113 Executive Councils. Kurudziro yake inonyaradza, kunyangwe tisina kumbopikisa kuve pamutemo kwechero seti yezvisarudzo: tsinhiro dzedu dzakaitwa kubva pakuona kwakakura kwekuona kurongeka kwemaitiro ese.
MunaGunyana 2020 ku112 Executive Council muTbilisi, Georgia, Executive Council yakasarudza kubata ayo 113th musangano muSpain muna Ndira 2021, mukati mehurongwa hweFITUR, pamazuva anozosimbiswa nenyika inotambira. 1.
Pamusangano mumwe chete iwoyo, Kanzuru yakatenderawo nguva yemaitiro esarudzo, paine zuva rekupedzisira rekutumira vamiriri mwedzi miviri kubva pamazuva eEC, kureva Mbudzi 18, 2020, 2.
Mwedzi mumwe mushure memusangano we112 Executive Council, muna Gumiguru 2020, Spain yakazivisa kuti FITUR yakamiswa muna Chivabvu 2021 nekuda kwemamiriro aivepo. Mukuburitswa kwenhau, kupinda mumusangano weFITUR komiti yekuronga neUNWTO Secretary-General Pololikashvili kwakazivikanwa 3. Zvinosuruvarisa, sarudzo yeKanzuru bata musangano we113 EC mukati megadziriro yeFITUR, pamazuva anozosimbiswa, haina kuteverwa.
Kutevera zuva rekupedzisira rekunyorera munaNovember, UNWTO yakapa muna Mbudzi 23 chinyorwa chekutaura kuNhengo pakugamuchira maviri. zvinogamuchirika vamiriri 4. Zvinosiririsa, gadziriro yakabvumidzwa ku112 EC kuzivisa Nhengo panosvika Zvita 15 ye vakagamuchira Candidatures haina kutevedzera. Kupfuurirazve, zvinoita sekunge zvinosiririsa kuti vakwikwidzi vanosvika vatanhatu vakarambwa nekuti havana kukwanisa kuendesa zvizere pakasvika nguva yakatarwa.
Pakanga pari panguva iyoyo, muna Zvita 2020, kuti pamwe chete naFrancesco Frangialli, takakurudzira nharaunda yeUNWTO kuti iongorore zvakare nguva ye113 Executive Council 5. Isu takanyeverawo kuti kuibata pamazuva eJanuary kwaizokonzera kutyora kweFinancial Regulation 14.7 6 , sezvakaitika zvinosuruvarisa.
113 Executive Council yakaitwa sezvakamborongwa muna Ndira 18 na 19, 2021, mumwe mumiriri anga aine nguva shoma achienzaniswa neaive akakodzera kuita mushandirapamwe unobudirira. Zvakadaro, mumusangano wekugarisana wakaitwa neUNWTO manheru ekanzuru, zvinosuruvarisa kuti mumiriri uyu haana kuuya kuzoratidzira nekuda kwekushaikwa kwemikana yakaenzana pamushandirapamwe.
Vadikanwi shamwari, handina kumboita nharo sarudzo yeKanzuru yakanga isiri pamutemo. Sezvakataurwa naFrancesco Frangialli munguva pfupi yapfuura, zviri pamutemo hazvina kukwana. Mukugadzirisa maitiro, unogona kuva zvose zviri pamutemo uye unzenza 7.
Muzvidzidzo zvinonzi kana mudzidzi akafoira, idambudziko remudzidzi; asi kana kirasi yose ikafoira, imhosva yomudzidzisi. Zvekutaura kana zuva rekupedzisira rekukumbira zvikumbiro raive diki zvekuti vanosvika 6 kunze kwevanomwe vakatadza kutevedzerwa nenguva? Kana kuti nei ruzivo urwu rwevamiriri vakarambwa rwakarambidzwa kubva kuNhengo, kunyangwe iyo Kanzuru yakanga yakumbira ruzivo vamiriri vakagamuchirwa kuparadzirwa?
Zvekutaura kana mumwe chete mumiriri asara akatarisana nenguva isingaite yemushandirapamwe, yakawanda yacho kuburikidza neKisimusi neGore Idzva apo manejimendi eVashanyi aivhara gore?
Zvekutaura kana Secretary-General akapinda musangano weFITUR organising committee wakachinja mazuva kubva munaNdira kusvika Chivabvu uye haana kutora danho rekugadzirisa mazuva eKanzuru. mukati meFITUR framework sezvakarairwa neKanzuru?
Ko kana Secretary-General akasiya mazuva aNdira kuKanzuru achiziva kuti achatyora maFinancial Regulations achiita izvi?
Zvekutaura kana Ethics Officer azvitaura 8with kuwedzera kunetseka uye kusuwa kuti miitiro yakapfuura yakanga yaregwa kamwe kamwe kuchisiya nzvimbo yakakwana kune opacity uye kutonga zvisina tsarukano?
Mumushumo une njere, Joint Inspection Unit yeUnited Nations 9 yakayambira Nhengo nezvesarudzo dzeExecutive Heads of Agencies kana mumiriri wemukati anokwikwidza pachinzvimbo ichocho atora chikamu: Vamiriri vemukati vari kukwikwidza chigaro chemukuru wepamusoro vanogona kushandisa zvisirizvo kana kushandisa zvisizvo mabasa avo nezviwanikwa (semudhumeni, mafambiro, zvivakwa zvemuhofisi, vashandi, nezvimwewo) kushandira danidziro dzavo. Mamiriro ezvinhu aya haangove asina tsika chete asi anozokonzerawo mikana isina kuenzana pakati pevamiriri vemukati nevekunze uye zvinogona kukonzera kuparadzaniswa kwevashandi.
Ivo maInspector vaive nehanya zvakanyanya nemukana iwoyo, vakazowedzera kuti: Maitiro akadai, tichitarisa maInspector, anofanirwa kugara achinzi haasi pamutemo uye asina tsika, uye achishorwa. Kana mumiriri wemukati kana mumiriri wekunze akabudirira achipomerwa kuita kwakadai, vanofanirwa kuferefetwa uye nzira yekuranga..
Zvichienderana neizvi, 113 Executive Council yakapa kurudziro yesarudzo yeSecretary-General, yamunayo pamberi penyu. Yave nguva yekuti imi muchiona makakatanwa ese, uye nemaonero amunawo emumiriri, kuti muvhotera kana kuvhota muchipikisa. Wakasununguka kuzviita chero nzira uye nzira yekuvhota inofanirwa kuvimbisa kuvanzika kwako: Remangwana reSangano riri mumaoko ako.
Nekukwazisa kwangu kwamuri mose,
Annex kune CE/112/6 rev 1. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE112_06_Procedure_SG_elections_2022-2025_rev1_En_0.pdf
Ndima 5 CE/113/4. https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_04_Recommendation_nominee_post_Secretary_General_2022_2025_En_0.pdf
Mitemo yezvemari 14.7: Panosvika 30 Kubvumbi gore rega rega, Secretary-General achaendesa kuKanzuru zvinyorwa zvakaongororwa zvemari zvegore rezvemari rapfuura. https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422319
https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_document_files/products/en/reports-notes/JIU%20Products/JIU_REP_2009_8_English.pdf yakatora ndima 77 ne87 (chikamu).
Birgit Trauer akatumirwa kuWorld Tourism Network WhatsApp Group:
Uku kushevedzera kwekujeka uye kunetseka kwetsika, mukuona kwangu, kunoratidza chinangwa chakanaka uye kuzvipira kuona kubatanidzwa, kuenzanirana, uye chisungo chehunhu icho chinotsigira 2021 United Nations yakatarisana nerunyararo nekuvimba. Ndatenda Dr. Taleb Rifai.